Uchwepheshe we-Semalt: Kungani Kufanele Ugweme i-Google Analytics Referral Spam
UNkk Chaykovskiy, i-8 (Semalt iMenenja yeNtuthuko Ephezulu yeMakhasimende, ukhumbuza ukuthi idatha iyinhloko yemikhankaso eminingi yokukhangisa ye-intanethi . Iningi labanikazi bewebhu kanye nabasebenzisi baxhomeke ekutheni bakwazi ukuphatha idatha. Ugaxekile we-Google Analytics uletha ithrafikhi engalungile nokuvakashelwa kwewebhu, okwenza ulwazi olusemgwaqweni lungalungile. Kubalulekile ukuthi abantu basuse ugaxekile wokudluliselwa kusuka kumetrikhi wabo we-Google Analytics - servers for minecraft pe 0.10.0. Isibonelo, ungathola ukuhambela okuningi kwewebhu kusuka ezizindeni ezinjengeDarodar noma i-Ilovevitality.
ugaxekile we-Google Analytics
Ugaxekile we-Google Analytics uhilela noma yikuphi ukuvakasha kwewebhu okuza kuwebhusayithi yakho kusuka kwezinye izizinda. Kwamanye amacala, ezinye izingosi onayo ezinqolobaneni ezingangena nazo zingabangela imoto engafanele. Ugaxekile wokudluliselwa lungaba yizinhlobo ezimbili ezilandelayo:
Ukudluliselwa kwe-Ghost: Ezinye izizinda kanye namawebhusayithi angafinyelela ku-Google Analytics UAID yakho. Baqopha ikhasi ukuvakashelwa ku-panel yakho ye-GA. Noma kunjalo, azibonakali njengokuvakashela iwebhu kwideshibhodi yakho yewebhusayithi. Kubonakala sengathi ukuvakashelwa kweghost ku-akhawunti yakho ye-GA.
I-spam bots: Kwezinye izimo, izivakashi ezingezona abantu zingase zichofoze izixhumanisi kuwebhusayithi yakho. Eqinisweni, lezi akuzona ukuvakashelwa kwewebhu ngokusemthethweni.
Izizathu ezenzelwe ugaxekile we-Google Analytics
Ukuhlaselwa kogaxekile kuhilela izinhloso eziningana. Njengazo zindlela eziningi ze-SEO ze-SEO, ugaxekile kuyindlela ephula imithetho eminingi ukuze ifike ekuhlosweni kwabo. Abantu abahlukunyezwayo bangawa nesisulu salokhu kuhlaselwa kogaxekile. ukuvakasha kwewebhu ngezizathu ezifana:
Ukusebenzisa i-malware. Njengokuhlaselwa kokukhwabanisa kwe-inthanethi, abantu ngabanye bafaka ulwazi lwe-malware kumawebhusayithi abo abaqhudelana nabo. Bangaphinda benze ezinye izenzo zobugebengu ezifana nobusela bekhadi lesikweletu noma ngisho nokweba imininingwane yokungena ngemvume. Ama-keyloggers angenza kube lula ubugebengu njengokweba ulwazi lwezezimali.
izivakashi zokudluliselwa. Kwezinye izimo, lokhu kuhlasela kuhloswe ekudluliseni abantu kwamanye amawebhusayithi. Bangabase-black hat ye-SEO ejensi abathembisa imiphumela esheshayo yokusungula ngesikhathi esifushane. Bajwayele ukusebenzisa ukuvakashelwa kumasayithi akho noma ikhasi, kodwa ungaguquki ekuthengiseni.
Ukuthengisa umkhiqizo. Amaningi we-Google Analytics ukuvakashelwa kogaxekile yizinkampani ezifuna ukuthengisa okuthile. Ngokufinyelela kuzigidi zamaklayenti emhlabeni jikelele, banethemba lokuthi umuntu oyedwa uzoguqulwa ekudayiseni. Ekugcineni, zigcina ziphazamise ulwazi lwakho lomgwaqo uma zizama ukuthenga.
Kungani futhi ungalungisa kanjani ugaxekile we-Google Analytics
Ukuvakashela iwebhu wogaxekile kwenza amawebusayithi ahlupheke ekutheni amamethrikhi awo angahambisani necebo lokuthengisa le-intanethi. Ezimweni eziningi, bavame ukuletha ulwazi olungathintanga nendlela ibhizinisi lakho lisebenza ngayo ku-intanethi. Kubantu abaningi, ukusebenzisa izihlungi zogaxekile kuthebhu yokuphatha ye-Google Analytics kungaletha isixazululo ekuhlaselweni okuningi kogaxekile. Isibonelo, i-spam domain njengeDarodar ingathola iphutha 403 lisho ukuthi abanalo igunya lokubuka iwebhusayithi yakho. Lesi sihlungi sogaxekile singavame ukwenza isayithi lakho libe mahhala kusuka kugaxekile. Kwezinye izimo, abantu behlisa amakhodi noma ifayela le-.htaccess kumsuka wesizinda. Lawa mafayela angavimbela abakwa-web crawlers njengalezi zizinda ezigaxekile.